Ny eto amintsika ny vahoaka no tambazana vola aman-karena hanohana ny ny kandida iray fa ny an-dry zareo, izy ireo aza no manampy ara-bola ny kandida. Ny vahoaka mihitsy no mandray an-tanana ny tontolo politika sy ny hoavin’ny firenena fa tsy toy ny aty amintsika hoe atao fitaovana ny olona mba hahazoana seza. Eto amintsika kosa ny politika dia hafa mihitsy ny heviny. Ao ny milaza fa fametsifetsena sy fanambakana ny madinika sy hanaovana fitaovana azy ireo mba hahazoan’ny olona iray toeram-boninahitra sy seza. Efa zary tsy mahaliana ny olona intsony io resa-politika io ary misy mihitsy aza ny milaza fa resaka tsy hihinanan-kanina. Tsy mba zava-dehibe aminy ny fifidianana, hany ambany ny taham-pahavitrihana amin’ny fifidianana. Ny antoko politika eto amintsika efa an-jatony ary toa nofinofy ny ho firaisan-tsaina sy fifanatonana fa ny zarazarao hanjakana napetraky ny mpanjanaka no mbola hampanjakaina. Dia voazarazara tokoa ny Malagasy ka tsy misy intsony ny firaisan-tsaina mba hanarenana ny firenena. Ny soa fianatra ka aleo mba mijery ny an’ny hafa e !